Waxgaradka Deegaanka Daba-gorayaale oo Taageero Buuxda u Muujisay Murrashaxiinta Xisbiga KULMIYE | Marsa News
Waxgaradka Deegaanka Daba-gorayaale oo Taageero Buuxda u Muujisay Murrashaxiinta Xisbiga KULMIYE
September 27, 2017 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Munaasibado is barbar socda ayaa ay beellaha Axmed Faarax (Habarjeclo) iyo Dan-wadaago (Ciidagale) ay si buuxda taageero isula barbar taageen murashaxiinta xisbiga KULMIYE uga qayb galaya doroashada madaxtooyada Md. Muuse BiixiCabdi iyo Md. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici).
Gaashaanbuurta Axmed Faarax
Guddiga guud ee beelweynta Gaashaanbuur Axmed Faarax, Cuqaasha, Xildhibaanada iyo nin-garboodka beelweynta Axmed Faarax Nuux ayaa kulan balaadhan la qaatay Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE ahna Murrashaxa Madaxweynaha ee Xisbiga KULMIYE Muuse Biixi Cabdi oo ay weheliyaan xubno sarsare oo ka tirsan hoggaanka Xisbiga KULMIYE. Cuqaashada iyo Guddiga Guud ee Gaashaanbuur Axmed Faarax ayaa balanqaaday inay beeshu cod iyo cududba la garabtaagan yihiin Murrashaxa Xisbiga KULMIYE Muuse Biixi Cabdi isla markaasna aan wakhtigan laga filayn inay xisbi kale ku doorsadaan xisbigii ay aasaaskiisa lahaayeen. Xildhibaanadda beelweynta Axmed Faarax Nuux ayaa si balaadhan u shaaciyay in ay ka xildhibaanno ahaan ay diyaar u yihiin inay safka hore ka galaan Ololaha Xisbiga KULMIYE ee doorashada soo socota. Wasiirka Hawlaha guud iyo guriyaynta Cali Xasan Maxamed ayaa u mahadceliyay odayaasha iyo waxgaradka iyo dhalinyaradda beelweynta gaashaanbuur Axmed Faarax , waxaanna uu wasiirku ku amaanay beelweynta midnimada iyo isku duubnida. Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE Muuse Biixi Cabdi , Guddoomiye ku xigeenka Xisbiga KULMIYE Maxamed Kaahin Axmed, Wasiirkii hore ee Maaliyadda Cabdicasiis Maxamed Samaale iyo Siyaasi Cabdilaahi Bakayle uga mahadnaqay odayaasha iyo Waxgaradka sidii ay u taageereen Xisbiga KULMIYE doorashooyinkii hore isla markastaana ay wakhtigan kalsooni buuxda ku qabaan beeshani.
Cuqaasha, Salaadiinta, waxgaradka, aqoonyahanka, dhallinyarada iyo haldoorka beesha Dan-wadaago oo katirsan beelweynta Ciidagale, ayaa si rasmi ah u shaacisay inay si buuxda u taageersan tahay xisbiga KULMIYE iyo murrashaxiintiisa. Munaasibad hadhimo-sharafeed ah oo ay goob joog ka ahaayeen haldoorka, labeenta, siyaasiyiinta, waxgaradka iyo siyaasiyiinta beeshan ku abtirsada oo maanta lagu qabtay Huteel Ambassador ee magaalada Hargeysa, ayaa lagu casuumay hoggaanka xisbiga KULMIYE oo uu gadh-wadeen u yahay guddoomiye Muuse Biixi Cabdi, isla markaana ay wehelinayaan ku-xigeennadiisa koowaad iyo labaad Md. Maxamed Kaahin Axmed iyo Axmed Cabdi Dheere, xoghayaha guud ee xisbiga KULMIYE Md. Xasan Siciid Yuusuf, guddoomiyaha golaha dhexe Md. Jaamac Ismaaciil Cige (Jaamac Shabeel), wasiirro, agaasimayaal guud iyo xubno kale oo xukuumadda iyo xisbiga katirsan, waxana ay beeshu shaacisay inay taageero buuxda la garab taagan tahay murrashax Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Md. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici). Xubno kamid ah haldoorka iyo aqoonyahanka beelaha oo halkaas ka hadlay, ayaa ku dheeraaday sida ay beel ahaan taageerada ugu hayaan xisbiga KULMIYE iyo murrashaxiintiisa, waxana ay caddeeyeen inay ku qanacsan yihiin xisbiga iyo hoggaanka waqtigan majaraha u haya. Suldaanka Guud ee beelaha dan-wadaago Suldaan Cawil Fiiqle iyo Caaqil Faajeer oo isaguna kamid ah hormoodka madax-dhaqameedka beesha Dan-wadaago, ayaa shaaca ka qaaday inay si buuxda oo aan kala hadh lahayn u taageersan yihiin xisbiga KULMIYE, waxana ay badka soo dhigeen waxqabadka taariikhiga ah ee uu xisbigu deegaannada beeshu degto iyo guud ahaanba dalka oo dhan ka fuliyey. Guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga KULMIYE Md. Jaamac Ismaacil Cige oo isugana madasha hadallo kooban ka jeediyey, ayaa beesha Dan-wadaago ku bogaadiyey sida ay ula badheedhay taageeradeeda xisbiga KULMIYE, waxana uu hoosta ka xarriiqay in codkooda iyo taageeradooduba yihiin mid hoggaanka KULMIYE ku xisaabtamayo.
Wasiirka wasaaradda Xannaanada xoolaha Somaliland Md. Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse, ayaa isaguna dhankiisa bogaadiyey taageerada ay beeshani iyada oo isku duuban u muujisay xisbiga KULMIYE, waxana uu ku adkeeyey in maalinta codka la bixinayo si hubsiimo leh loogu codeeyo murrashaxiinta KULMIYE. Ugu dambayn guddoomiyaha xisbiga KULMIYE, ahna murrashaxa madaxweyne ee xisbiga Md. Muuse Biixi Cabdi oo madasha hadallo bogaadin iyo dardaaran u badan ka jeediyey, ayaa qoorweynta iyo waxgaradka beesha Dan-wadaago oo la badheedhay taageerada ay KULMIYE u hayaan si weyn u hambalyeeyey, waxana uu sheegay inay deegaannada beeshani degtaa kamid yihiin meelaha uu xisbigu sida gaarka ah ugu xisaabtamayo.